Eyona nkomo inesiqingatha iPalm efakwe isiqingatha esebenza iglavu yesikhumba Umenzi kunye neFactory |Ilanga Elibomvu
Inkomo enesiqingatha esisiqindiweyo yesundu yahlulwe isebenza iglavu yesikhumba efikelelekayo
I-PALM -Isikhumba senkomo esikhethwe ngononophelo somgangatho ophezulu sihlala ixesha elide kwaye siyakwazi ukubhoboza, sikhusela izandla kwindawo enzima kwimisebenzi eyahlukeneyo.
EMVA-Gqoba i-polyester ngasemva ukuze ulungele ukuthuthuzela, umtya wesikhumba wenkomo ocazululiweyo ubonelela ngokhuseleko olongezelelweyo.
Ukubonelela ngokhuseleko kunye nokuguquguquka kwezandla zabantwana njengoko besenza imisebenzi kunye nokunceda ngomsebenzi wangaphandle
Ikhafu yokhuseleko enzima ikhusela ezihlahleni kwaye yenza kube lula ukutyibilika iiglavu zivule kwaye zicime.
Umgangatho ophezulu wokwahlula isikhumba sesundu senkomo, umnwe wokuqala, ubhontsi, iincam zeminwe, kunye nomtya weknuckle;Ukusikwa kweGunn kunye nobhontsi onamaphiko kubonelela ngokukhululeka, ukulingana okuguquguqukayo
Izandla ezithambileyo ziqinisekisa ukulingana kwaye zinceda ukugcina ukungcola kunye nenkunkuma
UMSEBENZI OWUNDOQO OYILO LOMZIMBA - 100% Ukwahlulwa Kwesikhumba Senkomo.Yenzelwe ukuSebenzisa uRhwebo kunye noShishino, Kwakhona Ilungele iMisebenzi eSiseko yaseKhaya!
GCINA IZANDLA ZAKHO ZIKHUSELEKILE-Iiglavu zoMsebenzi zeTarvol Gcina izandla zakho zikhuselekile ngokupheleleyo kwaye ukhululekile ngelixa usebenza!
IFANANA NABO BONKE UBUKHULU-UFityoliseke kakhulu!Yenzelwe ukuba ilingane amadoda nabasetyhini bobabini.
EZIQHELEKILEYO KUZO ZONKE IINTLOBO ZEMISEBENZI-Kubandakanywa oomatshini, ukuQhuba, ukugawula iinkuni, ezoLimo, ukuFama, uKwakha, abaqhubi beForklift, kunye nokunye!
I-100% IMALI EBUYILEYO YOMVELISI-I-Tarvol iqinisekisa zonke iiMveliso zayo kunye neZixhobo zoBomi!
UKHUSELEKO LWAKHO KUQALA: Ezi glavu zenziwe ngentambo yomqhaphu, i-wing style thumbs 8-ounce imigca yelaphu yomqhaphu etyheli/eblue enomqolo eelastiki ukunika izandla zakho ukhuseleko oluphezulu.
Ubume bobuNzululwazi desian
Inkxaso yokwenziwa ngokwezifiso, ivenkile yefektri, inani elikhulu ngokufanelekileyo
Isikhumba senkomo esinemigangatho emibini
Imathiriyeli yeglavu zonke zilukhuko lwenkomo olunemigangatho emibini, ukhetho olugqwesileyo lwezixhobo, umgangatho uqinisekisiwe
Uyilo olude, ukhuseleko oluninzi
Ukubamba okuqinileyo, ukomeleza ukuxhathisa kunye nokunciphisa amandla
Intambo yokunitha inayiloni
Ukuthunga ngomsonto wenayiloni komelele kwaye komelele.
1, ngokwendawo yabo yokusebenza ukukhetha iiglavu ze-welding, umzekelo, i-welders ifuna ukutyeba ngakumbi, iiglavu ze-welding ezinde, ezityebileyo zinokukhusela isandla aziyi kutshiswa, zide zikhusele ingalo aziyi kwenzakala.
I-2, ngokokhetho lwabo lomsebenzi, umzekelo, i-argon arc welding, i-argon arc welding, ngumsebenzi wesandla esinye, ngokubanzi umsebenzi wesandla sasekunene, kodwa iiglavu ze-argon ze-welding akufuneki zibe zingqimba kakhulu, kodwa kufuneka zibe zide.
I-3, ngokokhetho lwexesha, ukusetyenziswa ngokubanzi kweeglavu ze-welding ehlotyeni akuninzi kakhulu, oku kuya kuziva kushushu, umsebenzi awunelisi.
Ngaphambili: Iiglavu zoVavanyo ze-PVC zeVinyl ezilahlayo
Okulandelayo: Iiglavu zoKhuseleko eziLuhlaza iigloves zeNitrile ezineLining
Ixabiso eliphantsi leNkomo yeenkozo zesikhumba Umqhubi Osebenzayo Gl...
Iiglavu zoKhuseleko zesikhumba zaMadoda, iigloves zeGardening...
Iigloves ezibomvu zokuwelda inkomo yeNkomo Yahlukana ngesikhumba iglove yoMsebenzi...
IMitts ekwaziyo ukumelana nomlilo kwi-Oven Grill Fireplace ...